Sida loo sameeyo qaabka joornaalka | Hal-abuurka Online
Sida loo sameeyo qaabka joornaalka
Ilaa 20 ama 30 sano ka hor, samaynta joornaal ma ahayn qof uun ganacsigiisa. Waxoogaa aqoon ah iyo maalgashi la taaban karo ayaa loo baahnaa si loo guulaysto. Si kastaba ha noqotee, hadda, internetka, joornaalada internetka ayaa sii kordhaya oo la nool kuwa jireed. haddi aad waligaa rabtay samee joornaal ama waxaa lagu weydiistay inaad mid naqshadeyso, waxaa laga yaabaa inaad ka raadisay shabakada sida loo sameeyo qaabaynta joornaalka. gacan ma ku siinaa?
Waxaan u maleyneynaa in majaladaha ay noqon karaan noocyo iyo noocyo badan oo kala duwan. Large, yar, labadii biloodba mar, saddex biloodle, bille, joornaalada todobaadle ah ... Halkan waxaan ka hadal ku saabsan talaabooyinka ay tahay inaad qaaddo iyo wax kasta oo ay tahay inaad maamusho ka hor inta aanad bilaabin mashruucan.
1 Waxa la tixgeliyo ka hor inta aan la naqshadeynin joornaalka
2 U qaabee majaladda tallaabo-tallaabo
2.1 Isticmaal barnaamijka qaabaynta majaladda
2.2 Daboolka qaabeynta iyo go'yaal gudaha ah
2.3 Daabac oo qaybi
3 Sida loo Nakhshadeeyo Joornaal Degdeg ah oo Fudud
Waxa la tixgeliyo ka hor inta aan la naqshadeynin joornaalka
Joornaalka waxa loo tixgaliyaa hab isgaarsiineed. Waxay diiradda saaraysaa mawduuc gaar ah; Dhab ahaantii, aad ayay dhif u tahay in la helo majaladaha guud tan iyo, xaaladdaas, waxaa loo tixgelin lahaa in ka badan wargeys.
Inta badan, marka aad maqasho ereyga joornaal, waxaa maskaxdaada ku soo dhaca kuwa lagu iibiyo dukaamada waraaqaha iyo goobaha wararka. Laakin balaarinta internetka, majaladaha casriga ah waa in sidoo kale maskaxda lagu hayaa.
Marka la naqshadeynayo joornaalka, waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo dhinacyada qaarkood Inkasta oo aysan la xiriirin naqshadeynta lafteeda, waxay saameyn ku leeyihiin majaladda. Maxayse yihiin?
Macmiilka aad beegsanayso. Si kale haddii loo dhigo, waxaan ka hadalnaa waxa ay yihiin dhageystayaasha bartilmaameedka ah. Maxayse muhiim u tahay? Hagaag, sababtoo ah daboolka, sawirada iyo qoraalka waa inay noqdaan kuwo soo jiidasho leh oo ku filan si ay u soo jiitaan dareenkaaga oo aad u hesho mid xiiso leh. Tusaale ahaan, qiyaas inaad rabto inaad abuurto joornaal carruurta ah. Laakiin waxaad dhigtaa jaldiga cinwaanno aad diiradda u saaraya waalidiinta marka loo eego carruurta, iyo daciifnimo, sawirro aan macno lahayn oo aan wacnayn. Ma kaa iibsan lahaayeen? Sida ugu macquulsan waa maya.
Wakhtiga majaladdaada. Taas macnaheedu waa, haddii aad rabto inaad daabacdo toddobaad kasta, bil kasta, laba, saddex, afar ... Waxaad u maleyn kartaa in tani aysan saameyn ku yeelanayn naqshadeynta, laakiin runtu waxay tahay inay sameyso tan iyo markii ay tahay inaad ogeysiiso. ku dhex jirto si ay u ogaadaan marka ay tiradda soo socotaa soo baxayso haddii aad doonayso inay ku sii akhriyaan.
Muxuu ka hadli doonaa majaladdaadu? Sida ay muhiimka u tahay macmiilka aad beegsanayso iyo sidoo kale dulucda majaladdaada. Waxaan ula jeedaa, maxaad ka hadli doontaa? Waxaa jira joornaalo ku saabsan mowduucyo badan: shineemada, dhaqanka, buugaagta, xanta... Markaa waa inaad diirada saartaa wax aad ogtahay inay jiraan dad dhagaystayaal ah, inaad tahay khabiir (ama aad leedahay dad) iyo inaad jeceshahay iyo / ama lacag hel.
U qaabee majaladda tallaabo-tallaabo
Naqshadeynta joornaal maaha mid adag. Haddii aad haysato mid gacanta ku haysa, waxaad ogaan doontaa inay jiraan laba qaybood oo aasaasi ah. Dhanka kale, daboolka hore iyo dambe ee loogu talagalay isla bogga. Bogagga ugu horreeya ee majaladda ayaa dib u dhici doona, badanaa halka la dhigo wada-hawlgalayaasha majaladda (jaldiga hore) iyo waxa ku soo bixi doona majaladda soo socota (ee jaldiga dambe).
Markaas waxaa jiri lahaa go'yaal ka kooban majaladda. Haddana, haddii ay jir tahay, ka hore waxa la dhigayaa kan dambe oo waa la is dhex galiyaa si marka la daabaco, oo la laalaado, wax kastaa waa saxan yihiin iyo sida la rabo.
Haddii joornaalku yahay mid muuqaal ah, markaa tani maahan kiiska, waxaana loo sameeyaa si nidaamsan.
Waa maxay tillaabooyinka ay tahay inaad qaaddo? Adigoo ku xisaabtamaya inaad haysatid dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah majaladdaada (Sawirro, Sawirro, Xayeysiisyo, Qoraallo...) Tallaabooyinka ay tahay inaad qaaddo waa:
Isticmaal barnaamijka qaabaynta majaladda
El Midka ugu badan ee la isticmaalo laguna taliyay waa Indesign. Ma ahan barnaamij lacag la'aan ah, laakiin doorashadoodu ma gaaraan heerkan. Sidaa darteed, haddii aad runtii rabto inaad sameyso joornaal, oo aadan isticmaalin qaab-dhismeedka si aad u abuurto, waa inaad maalgelisaa iibsashada barnaamijka.
Ma adka in la isticmaalo, laakiin waxaad u baahan doontaa wakhti aad kula qabsato, iyo, wax walba, si aad u barato. Beddelka kan waxaad haysataa QuarkXpress, Illustrator, CorelDrwa, FreeHand ...
Daboolka qaabeynta iyo go'yaal gudaha ah
Marka aad hesho barnaamijka, tallaabada xigta waa naqshadeyso daboolka iyo bogagga gudaha. Qaar badan oo ka mid ah waxa ay sameeyaan waa si gooni ah, si, marka ay fasaxaan, waxay ku biiraan dhammaan dukumentiyada si ay u daabacaan, ama si ay u helaan nuqul ka mid ah majaladdaas oo pdf ah (waa sida ay tahay). sida caadiga ah waa la bixiyaa, marka lagu daro ka akhri online).
Halkaa marka ay marayso waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo qaabka joornaalka (haddii ay ku jiri doonto A4, B5, B6…) iyo sidoo kale nooca warqadda lagu sawiri doono (waxay saameyn doontaa midabada), naqshadeynta qoraal kasta iyo sawiro, iwm.
Tani waa qaybta ugu muhiimsan ee joornaalka sababtoo ah maaha inaad ka fikirto oo kaliya sida loo qaybiyo sawirada iyo qoraallada, xayaysiisyada iyo qaababka, laakiin sidoo kale waa inaad ka fekertaa:
Qoraalka majaladda. Labada cinwaan iyo qoraal hoosaadyo iyo qoraalba.
midabada wakiil. Ma qiyaasi kartaa joornaalka carruurta oo isticmaalaya madow iyo caddaan?
Qaabka. Taasi waa, sidee baad u naqshadayn doontaa bog kasta oo ka mid ah. Qaarkood isku mid bay noqonayaan, laakiin haddii aad dhammaantood sidan u dhigto waad caajisaysaa.
Sida iska cad, waxaan ka boodeynaa xaqiiqda ah in sawirada aad isticmaali doonto ay yihiin kuwo tayo leh iyo in maqaaladu ay leeyihiin warar run ah, xogogaal ah, oo ku xiran dadweynaha, inay yihiin kuwo soo jiidasho leh oo xiiso leh (oo si fiican loo qoray).
Daabac oo qaybi
Marka aad dhammayso majaladda, waa waqtigii la lahaan lahaa go'aanso inaad daabacdo (sidaas darteed waa inaad geysaa daabacaha oo aad siisaa faahfaahintii hore ee qaabka, nooca warqadda ...); ama dhig soo dejiso internetka (ama ku dheji boosteejo si joornaalka loo akhriyo online).
Waxaas oo dhan waa qayb ka mid ah qaabaynta majaladda.
Sida loo Nakhshadeeyo Joornaal Degdeg ah oo Fudud
Qodobbada kor ku xusan maaha kuwo adag. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay, markaad bilawdo naqshadaynta joornaalka, iyo mid kasta oo ka mid ah boggaga, waxaad ku dhamaan kartaa inaad ka dheregsan tahay oo aanad waligaa ka bixin. Sababtan awgeed, qaar badan oo bilaabay ayaa doorta, ka hor intaadan samayn naqshadahaaga, adoo isticmaalaya templates.
Kuwaas waxaa laga heli karaa labadaba lacag-bixinno iyo bilaash. Halkee? Waxaan kuu dhaafnay liis
Hadda waa inaad la socotaa oo aad waqti ku qaadatid samaynta qaabka joornaalka. Midka ugu horreeya waxa laga yaabaa inuu noqdo kan ugu dheer ee aad la qaadato, laakiin markaa wax walba ayaa kuu fududaan doona. Dabcan, ha lumin qoraalkaas sababtoo ah waxay kuu adeegi doontaa kuwa kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Sida loo sameeyo qaabka joornaalka
sawir-qaadayaasha caanka ah